Miaraka amin'ny fanampian'ny technoloy, mety misy fahasamihafana kely eo amintsika sy ny mpanakanto. Miaraka amin'ny fahalianana feno, piano, mozika ary ny toe-po no hofehezinay. seho maro, refy ary fiasa, kanto sy matanjaka, tombony azo amin'ny piano digital digital series. Ataovy lasa ampahany amin'ny fiainantsika ny mozika sy ny fitendrena piano.
Fahatokisana piano lehibe azo zahana amin'ny vidiny mirary. Fanampiny mahavariana ho an'ny laharam-pahamehana YY hajaina indrindra, ny XXx ultra-portable dia misy ny hetsika fitendry keyboard Responsive Hammer Compact, ny santionany piano Harmonic Imaging 88-key, ary ny fifandraisana Bluetooth® namboarina mba hanomezana fitendrena piano lehibe mahafinaritra sy feo ao amin'ny vidiny sarobidy tokoa.
Ny fahatsapana ny siansa sy ny teknolojia no mpitatitra zavakanto mampiseho ny olona maniry fatratra ny ho avy. Plume Intelligent Piano, dia ny mahatsapa sary amin'ny alàlan'ny siansa sy teknolojia. Avy amin'ny fiovan'ny fahatsapana ny fihanaky ny saina, amin'izao fotoana izao, ny Plume Intelligent Piano dia lasa fironana tsy azo ihodivirana eo amin'ny mozika. Ny andian-dahatsoratry ny Plume Piano, mahatonga ny olona tia mozika afaka mahatsapa ny fikasihana sy ny tanjaka avy amin'ny fony amin'ny fomba fijery samihafa. Toy ny tsy mbola fahita. Andao isika hanafaka miaraka.
Electric Grand Piano, Piano Digital Upright, Piano mandeha amin'ny herinaratra, Kitendry Piano Smart, Piano nomerika lafo vidy, Fanamboarana Piano Digital,